Ahoana ny fomba hamoronana tranokalan'ny bilaoginao - With 6 Easy Steps - Learn Expert Blogging
Ahoana ny fomba hamoronana tranokalan'ny bilaoginao
Mora ny mamorona tranokala bilaogy. Ny bilaogy dia iray amin'ny karazana tranonkala mifantoka manokana amin'ny fanoratana atiny. Ny fampahalalana sarobidy kokoa omenao an'ireo mpampiasa averin'izy ireo ao amin'ny tranonkalanao hamaky ireo lahatsoratra.
Amin'ny fiteny ankapobeny, nahita lahatsoratra vaovao izahay, vaovao momba ny olo-malaza sy ny fanavaozam-baovao mahazatra, sns dia ampahany amin'ny bilaogy daholo.
Ny bilaogera amin'ny ankapobeny dia manoratra fampahalalana tena izy miaraka amin'ny fomba fijerin'izy ireo momba izay tsy mety sy marina momba zavatra iray. Ohatra, ny finday paoma vao natomboka dia misy fisondrotana sy fihemorana.
Lahatsoratra bilaogy iray azontsika soratana momba ny fahombiazan'ny telefaona, Toetoetra, ary fanombanana sy fifanakalozan-kevitra ao amin'ny bilaogy. Manampy ny mpampiasa amin'ny fahatokisana azy ireo izany ary ho setrin'izany, ny mpamaky dia manoratra ny heviny ao amin'ny faritra maneho hevitra izay mampifandray mora foana ny mpanoratra sy ny mpamaky.
Resaka sy fifampiresahana ity, fizarana hevitra izay lasa fomba iray ahazoana vola be raha tsy ny mpamaky mampiseho ny mahaliana sy ny fahafaham-po amin'ny fampahalalana mahatoky miaraka amin'ny fitarihana mety.
Araka ny hitanao izao, Ny lahatsoratra vakianao dia lahatsoratra bilaogy amin'ity tranonkala ity. Ny lahatsoratra rehetra ao amin'ny tranonkalantsika amin'ny fanomezana fampahalalana mahavokatra ho an'ny mpamaky bilaoginay. Manampy ny mpiara-monina izahay amin'ny fizarana fomba tena ahazoana vola amin'ny Internet. Miaro azy ireo amin'ny karazana fahadisoam-panantenana izany.
Tsy menatra miteny aho, nandritra ny fanombohan'ny diako fitorahana bilaogy, Fahadisoana taonina no nataoko. Tamin'izany fotoana izany, Vaovao tanteraka aho. Tsy mamoy ny tenako aho, manana traikefa mihoatra ny fito taona amin'ny dian'ny bilaogy, Manana tombony aho hitarihako anao tsara amin'ny tsy famerimberenana ireo lesoka. Ny hany zavatra tokony hamakianao tsara ity lahatsoratra ity.
Ao amin'ity torolàlana ity, hiafara amin'ny fomba mety ianao hanombohana bilaogy haingana sy mora.
6 Dingana mora hamoronana tranokala bilaoginao
Dingana 1: mifantina ny anaranao bilaogy
Dingana 2: Ataovy an-tserasera ny bilaogy
Dingana 3: Blog Customization: Fikirana
Dingana: 4 Manoratra Lahatsoratra Bilaogy Voalohany
Dingana 5: Fampiroboroboana ireo lahatsoratra bilaogy
Dingana 6 : Fanamafisana ny blaogy: Mahazo vola
Ao ny ambony 6 dingana tokony harahinao alohan'ny hanombohana ny bilaoginao.
haka Anaran'ny blaogy: Voalohany indrindra, tsy maintsy misafidy ny anaran'ny bilaogy ianao.
Vidio ny Domain sy Hosting: Ataovy amin'ny Internet ny bilaoginao.
Fametrahana ny bilaoginao: Blog Customization.
Manoratra ny bilaoginao: Fahafinaretana lehibe hanoratanao traikefa
Fampiroboroboana ny Blog: Fizarana amin'ny Facebook, Twitter sns.
Mahazoa vola amin'ny alàlan'ny bilaogy: Affliate, Adverstisement.
Andao atomboka ny bilaoginao
Io no anarana izay mitovy amin'ny adiresin'ny tranonao. Raha mamaky ny anarany ao anaty tranonkala ilay mpamaky, hanokatra tranokala bilaogy ity. Manoro anao manokana aho hanana anarana bilaogy misy lohahevitra voakasik'izany.
Araka ny nolazaiko anao teo aloha, mitovy amin'ny anaran'ny fivarotanao io. Misy fepetra sasany ao ambadiky ny fisafidianana ny anaranao bilaogy. Ity misy sosokevitra iray tokony handeha foana amin'ny .com. Ny antony mahatonga ny .com dia azo itokisana amin'ny ankapobeny manerantany. Ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra izy io.
Ho fanampin'izany, tokony hanoratra bilaogy ianao izay manana traikefa azo ampiharina amin'ny fiainana. Tsapako manokana fa tokony hanana atiny betsaka ianao.
Azonao atao ny manoratra ny 100 ny 200 mora foana ny mandefa bilaogy. kosa, raha manoratra lohahevitra tsy fantatrao ianao dia hiafara aorian'ny fanoratana 50 ny 60 lahatsoratra.
Ohatra, Vao haingana aho no nanampy ny namako mpampianatra izay manana fahalalana tsara momba ny fizika. Te handefa ny bilaogin'izy ireo iray volana lasa izy ary liana amin'ny fanoratana gadget elektronika. Nomeko azy ny tolo-kevitra hanoratra momba ny fizika satria manana fahalalana lalina ianao.
Fomba tsara hanampiana ny olona amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany izay atrehin'ny mpianatrao hitanao rehefa mampianatra ny mpianatrao.
Nifanakalo hevitra tsara izahay, Toy izany koa, tokony hanoratra bilaogy ihany koa ianao momba ny fiainanao fa tsara foana ny mandeha amin'ny fialamboly, fitiavana na asa.
Ny dingana faharoa dia ny fanolorana ny bilaoginao amin'ny Internet. Azo atao izany raha misoratra anarana tsara amin'ny fonosana fampiantranoana ianao.
Ny dingana iray hafa dia ny fanomezana ny bilaoginao an-tserasera. Midika izany raha misy olona mitady ny atiny bilaoginao amin'ny alàlan'ny fanoratana ny anaranao bilaogy ao anaty browser. Tokony hiseho ny bilaoginao. Raha manao izany dia mila mividy fampiantranoana. Androany dia misy tolotra tsara sasany hampihena ny vidin'ny fampiantranoana anao.
Manoro anao manokana aho tsy handoa vola amin'ny anaran'ny habaka ary koa hampiantrano manokana. Io dia hampiakatra ny vidin'ny tranokala bilaogy amin'ny ankapobeny.
Raha tokony ho izany, ny orinasa fampiantranoana sasany toa ny Bluehost dia manampy anao hanome serivisy fampiantranoana manana anarana domain dot.com maimaimpoana. Ny serivisy tranokala hafa dia mamela anao hanangana ny bilaoginao amin'ny vidiny mihena. voalaza etsy ambany eto amin'ny latabatra izy ireo.
Mpamatsy tranonkala fampiantranoana WordPress tsara indrindra
BlueHost tsara indrindra ho an'ny fampiantranoana Wordpress Starter
Jereo ny tolotra farany
50% eny amin'ny fampiantranoana cPanel miaraka amin'i GoDaddy!
Safidy mora azo Hostgator (Domain .COM maimaim-poana & Hatramin'ny 50% Tsy mandeha amin'ny fampiantranoana)
(Mampiasà kaody:- Masoandro)
Safidy fampiantranoana Hostinger Low Shared (Hatramin'ny 84% Drafitra OFF Premium Shared Hosting )
(Mampiasà kaody:- PREMIUM8 )
Manomeza tolotra mora fividianana entana: Mitahiry hatramin'ny 86% amin'ny Domain & Kitapo fampiantranoana zaraina
Ny dingana fahatelo, ianao hanamboarana ny tranonkalanao. Ny fanaingoana dia mitaky fametrahana lohahevitra fampidinana haingana, fisehon'ny tranonkala, haben'ny endri-tsoratra, sns endri-javatra fototra.
Anisan'izany ny fanapahana modely tsara. Ny zava-drehetra momba ny fampisehoana ny atiny web anao, mijery tsara, milamina, tsara, ary mahaliana.
Aorian'ny fametrahana ny tranokalanao fototra, tonga ny fotoana hanoratana lahatsoratra bilaogy tsara.
Manoratra ny bilaoginao voalohany. Heveriko fa fomba tsara iray hizarana an'izao tontolo izao ny eritreritrao. Ankafiziko indrindra ity ampahany ity satria mizara ny zavatra niainanao manokana momba ny zavatra azonao tamin'ny fiainanao ianao.
Ilay lahatsoratra bilaogy manampy fa mitady ny olany ny olona ary manana fahalalana betsaka momba izany ianao. Ho an'ity, Amin'ny ankapobeny dia mandray ny fanampian'ny Google aho hanatontosana autocomplete ary koa ny fitaovana SEO sasany. Rehefa atambatra sy heverinay ny teny roa karoka amin'ny habetsahan'ny olona mitady. Izany dia manentana ahy bebe kokoa hanoratra lahatsoratra miaraka amin'ny fiheverana olona izay hamaky ity lahatsoratra manokana ity
Eto aho dia te hanome toro-hevitra ho anao. Tsy maintsy manoratra ny lahatsoratrao amin'ny teknika SEO eo an-pejy ianao. Ny antony dia– manampy an'i Google hahatakatra ianao fa afa-po akaiky kokoa sy tsara. Tsy isalasalana fa nanatsara ny tenany manokana i Google. Miaraka amin'ny teknika fanavaozana vaovao, izy ireo dia afaka mahatakatra ny atiny soratanao.
Ny dingana manaraka dia ny fampiroboroboana ireo bilaogy. Ny sehatra malaza indrindra dia ny Facebook, Twitter, Instagram ireo sehatra rehetra ireo dia manana fivezivezena an-tapitrisany.
Ity dia ampahany amin'ny marketing izay azo antoka fa ilainao. Tamin'ny fanombohana voalohany ny bilaoginao, mila fotoana be dia be ny fampahafantarana amin'ny olona hoe iza ianao ary momba ny inona ny bilaoginao. Raha izany dia, afaka mandeha mividy ianao milaza amin'ny mpamaky hoe inona ny bilaoginao? Inona no atiny soratanao? Facebook, Twitter, Instagram amin'izao fotoana izao no fomba malaza hanaovana marketing tsara
Nandritra ny fanombohan'ny diako voalohany tamin'ny bilaogy, rehefa nanoratra ny lahatsoratra aho tamin'io fotoana io, Nozaraiko tamin'ny vondrona Facebook mifandraika amin'izany ny lahatsoratro. Manampy ahy hitarika fifamoivoizana amin'ny tranokalako io.
Ho fanampin'izany, ao amin'ny Twitter, afaka mandray ny tombotsoan'ny tenifototra ianao. Ao amin'ny Instagram, afaka mampiroborobo ny tenanao amin'ny anaran'ny bilaogy bilaogy tranonkala ianao. Manaova horonantsary fohy ho an'ireo lahatsoratra Instagram izay manery azy ireo hanoratra zavatra manintona ny olona hanoratany ny anaranao bilaogy ao amin'ny Google hahitanao hoe aiza no misy anao ary asehoy ny faniriana hamaky ny atiny arak'izay azony atao..
Rehefa lasa malaza eo amin'ny mpijery ny atiny fitorahana bilaogy. Manana fomba maro ianao hanangonana azy io. Miankina amin'ny lohahevitra, manoratra ianao dia mila mifantina ny fomba tsara indrindra hahazoana vola sy hahazoana vola amin'ny alàlan'ny mpamaky anao.
ankehitriny, raha ny momba ny fananganana vola amin'ny tranokalanao. ny marina, miankina amin'ny karazana tranokala entinao ny vola. Ohatra, raha manoratra momba ny menaka fanatsarana tarehy aho. Ao amin'ny bilaogiko, raha izany dia, Manana ny fahafaha-manolotra ny sasany amin'ireo vokatra amazona ho an'ny mpijery iraisam-pirenena aho.
Rehefa manohy manoratra ilay lahatsoratra aho, Hizara ny traikefako manokana momba ny torohevitra tsara miaraka amin'ny vokatra ampiasaiko aho.
Rehefa nividy niaraka tamin'ny Rohy afiliana Amazon, izany dia hanome anao komisiona tsara.
Etsy ankilany, ny fampiharana ny Affiliate dia tsy ilaina apetraka amin'ny lohahevitra rehetra. amin'izao fotoana izao, tsy afaka mametra ny tenanao amin'ny AdSense irery ianao. misy sehatra dokam-barotra haino aman-jery marobe toa ny mediavine, Ezoic izay azo antoka fa manampy anao hahazo vola 1000 + dolara ihany amin'ny dokam-barotra.
Noresahiko teo aloha ity lahatsoratra ity momba ny namako izay mitantana tranokala fanabeazana iray izay mahazo vola amin'ny dokambarotra ary mahazo karama tsara amin'ny fitiavany izy.
Afaka mamaky koa ianao:
Miara-miasa Affiliate sy Doka
How To Earn $1000/M With Affiliate Marketing: 6 Dingana tsotra
ankapobeny, tena sarobidy ny manomboka bilaogy amin'izao andro izao. afaka manoratra izay zavatra mahaliana anao ianao. tsy mila mametra ny tenanao amin'ny faritra manokana ianao. ny zavatra zarainao amin'ny mpihaino sy ny valiny, mahazo vola amin'izany ianao.
Inona no vakin'ny hafa?
Ahoana ny fananganana tranokala aorian'ny fividianana anarana nomena anarana?
Ohatrinona ny vola azonao amin'ny Blog WordPress?
Previous PostAhoana ny fananganana tranokala aorian'ny fividianana anarana nomena anarana?
Copyright 2021 - ambiny.org- Learn Expert Blogging. Disclosure: This post may contain affiliate links, which means we may receive a commission if you click a link and purchase something that we recommended. Read more about Affiliate disclosure here.